AmaNgqina KaYehova EAfrika
ABEMI 994 839 242
ABAVAKALISI 1 421 375
IZIFUNDO ZEBHAYIBHILE 3 516 524
Balandela Utitshala Wabo
UJosé ngumzalwana oselula onguvulindlela ohlala kumaphandle aseLuanda, eAngola. Ufundisa kwisikolo esikufuphi neHolo yoBukumkani. Lo mfana uneempawu zobuKristu nokwaziyo ukufundisa, uyathandwa yaye uyahlonelwa ngabafundi bakhe abayi-86. Phakathi evekini iintlanganiso zebandla lakhe zingena ngo-4:00 emva kwemini, ngoko uyavunyelwa ukuba atshayise kwangethuba ngolo suku. Ukuphuma kwakhe, uya ngqo eHolweni yoBukumkani.
Abanye abafundi babezibuza ukuba kutheni uJosé ephuma kwangoko esikolweni yaye uyaphi. Ngenye imini abafundi ababini bamlandela baza baya ezintlanganisweni. Ukanti ngenye imini abanye abafundi abathathu baya ezintlanganisweni ngosuku uJosé awayenentetho ngalo kwiNtlanganiso Yenkonzo. Zathi ndii ngokukhawuleza ezo ndaba eklasini. Kwiiveki ezalandelayo, baya besiba baninzi abantwana ababesiya ezintlanganisweni, besusela kwabayi-5 ukusa kwabayi-21. EHolweni yoBukumkani abavakalisi bacela ukubaqhubela izifundo, yaye abaninzi bavuma. Xa abo bafundi baya neencwadi zabo zokufunda iBhayibhile esikolweni, nabanye baba nomdla baza baya ezintlanganisweni. Wathi uphela loo nyaka, babe beyi-54 kubantwana beklasi kaJosé abayi-86 abaya ezintlanganisweni. UJosé uthi abayi-23 kubo benza inkqubela futhi bazikhuthalele iintlanganiso.
ENigeria: UJoseph noEvezi badlala iDVD entsimini
Xa uJoseph noEvezi, oovulindlela abakhethekileyo babefika kwisabelo sabo esitsha eNigeria, abavakalisi abaninzi ababetyhafile bathi: “Intsimi esinayo incinane. Sele siyisebenze kakhulu.” Emva konyaka, uJoseph wabhalela isebe esithi: “Siyisebenza yonke imihla evekini intsimi yethu yaye abantu abanamdla kwaye bayachasa. Siya entsimini siphethe iDVD size sibonise abantwana, abafikisayo nabantu abadala iividiyo. Loo nto ibangele ukuba nyanga nganye mna nomkam siqhube izifundo eziyi-18, kangangokuba ngamanye amaxesha siyohluleka ukuya kuzo zonke. Nabantwana basoloko besicela ukuba sibabonise ‘iividiyo zikaSihle.’”
Isiqithi Sikhalela Uncedo
ECongo (eKinshasa): Bashumayela kubalobi
NgoAprili 2014, iofisi yesebe yaseCongo (eKinshasa) yafumana ileta eyayivela kwiqela labalobi ababehlala kwiSiqithi saseIbinja, eLake Kivu. Aba balobi babesoloko besiya kushishina kwizixeko ezikufutshane. Xa babesiya kwisixeko saseBukavu, badibana namaNgqina kaYehova. La maNgqina abashumayeza aza abanika iBhayibhile neencwadi.
Abalobi bayithanda into abayifunda kwezo ncwadi baza bayixelela abanye ababehlala nabo esiqithini. Abaninzi baba nomdla, ngoko aba balobi bathumela omnye ukuba aye kukhangela amaNgqina eBukavu, aze awacele ukuba eze eIbinja. Loo mntu akazange awafumane waza wabhalela iofisi yesebe wathi: “Sicela nisithumelele amaNgqina ukuba aze kusinceda sazi iBhayibhile njengawo, asifundise nokuba singenza njani ukuze siphile ngonaphakade. Angaxhalabi ngendawo yokuhlala. Ndingawanika nesiza sam ukuze akhe icawa. Sifundile eBhayibhileni nakwiincwadi zenu ukuba bubuxoki bodwa obu sibufundiswa ngabefundisi. Ngoku siqinisekile ukuba silufumene unqulo lokwenyaniso. Apha eIbinja baninzi abantu abafuna ukufunda iBhayibhile ukuze babe ngamaNgqina kaYehova.”
Le leta yathi eIbinja kukho abantu abanomdla abamalunga nabayi-40. Kwesi siqithi kuhlala abantu abangaphezu kwe-18 000 kodwa akukho maNgqina. Iofisi yesebe yakhawuleza yathumela oovulindlela ababini abakhethekileyo abathetha ulwimi lwalapho.
“Soze ndiphinde ndiphoswe siSikhumbuzo.” Watsho njalo omnye umfundisi wecawa eyaziwayo eMzantsi Afrika. Yintoni eyabangela ukuba le nkokeli iye eSikhumbuzweni ngoAprili 2014? Emzini wakhe kwankqonkqoza abazalwana ababini abaziintlanga ezahlukeneyo ababesentsimini. Babesazi ukuba lo mfundisi udla ngokungawamameli amaNgqina. Omnye wabo bazalwana, uAdaine, uchaza into eyenzekayo: “Samangaliswa xa esingenisa ngaphakathi. Saxox’ intw’ ende. Wayesothuswa kukubona umntu omhlophe eshumayela kwindawo yabantsundu yaye ethetha ulwimi lwabo. Kwaqaliswa isifundo seBhayibhile.”
UAdaine uthi: “Le ndoda ibingumvangeli nomfundisi iminyaka engaphezu kweyi-40, kodwa kungona ifumana zonke iimpendulo zemibuzo yayo xa ineminyaka eyi-80. Iyayithanda incwadi ethi Xelisa Ukholo Lwabo. Xa sifunda, inkqaya ezinye iimfundiso ize ishumayele ngazo ecaweni. Yabonisa ibandla layo incwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? yaza yathi, ‘Xa amaNgqina kaYehova efika nale ncwadi emizini yenu, wamkeleni nize niwaphulaphule, kuba le ncwadi inobuncwane beemfundiso zikaThixo.’”
Lo mfundisi waxelela uAdaine ukuba uthethiswe kabukhali ziinkokeli zecawa yakhe zaza zathi makangashumayeli ngamaNgqina kaYehova ecaweni. Wayengazi ukuba makenzeni. UAdaine wakhumbula ingxelo ethetha ngomfundisi waseMyanmar, ekwiNcwadi Yonyaka YamaNgqina KaYehova Ka-2013. Xa wamfundela le ngxelo, lo mfundisi wathi: “Ndim ke lo kuthethwa ngaye apha! Ndimele ndenze isigqibo esibalulekileyo, yaye ndimele ndisenze ngokukhawuleza.”
ISikhumbuzo sokuqala awaya kuso lo mfundisi sasingoAprili 14, 2014, waza wathi soze siphinde simphose. Wathi uzimisele ukuwaqhawula amatyathanga nonqulo lobuxoki.
Ukukhangela Kumasimi Ekoko
EGhana: UBaffour noAaron bashumayela kumasimi ekoko
UBaffour noAaron ngoovulindlela abakhethekileyo eBokabo, ummandla onamasimi achumayo ekoko kwintshona yaseGhana. Ukuze bafikelele kwintsimi yabo egqagqeneyo, enezindlu ezincinci, kufuneka bahambe kwiindledlana ezisemasimini ezinamajiko-jiko. Kulula ukulahleka kuzo! Ngenye imini uBaffour noAaron bahamba ngenye indlela abangaqhelanga kuhamba kuyo, eyaya kubafaka kwizindlu abangazange baya kuzo. Apho badibana noMichael noPatience, ababa nomdla kwisigidimi sabo baza bavuma ukufundelwa iBhayibhile. Ekuhambeni kwexesha uMichael wabaxelela oku: “Sagqibela kwiminyaka emibini edlulileyo ukuya ecaweni kuba sabona izinto ezingavisisaniyo neemfundiso zeBhayibhile. Ukususela ngoko, qho ngorhatya mna noPatience besizifundela iBhayibhile, sikhangela iimpendulo zemibuzo esinayo. Besisoloko sithandazela ukuba sincedwe sifumane inyaniso.” Bengalibazisanga, baya kwiintlanganiso nakubeni kwakufuneka bahambe umgama omde otyhubela emasimini. Esi sibini sibhaptizwe kulo nyaka udlulileyo yaye singoovulindlela abathe ngxi. Naso ngoku sihamba kwezo ndledlana zinqumla amasimi sikhangela abanye “abathandazela ukuncedwa bafumane inyaniso.”
UMichael noPatience bacanda emasimini